musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Nzvimbo Dzakanakisa dzekufambisa dze2022
Lonely Planet nhasi yakafumura nyika dzayo gumi dzepamusoro, maguta nematunhu ekushanyira gore rinouya nekuburitswa kweLonely Planet's Best in Travel 10.
Yakanakisa muKufamba 2022 iLonely Planet's 17th yegore muunganidzwa yenzvimbo dzinopisa kwazvo pasi rose uye izvo zvinofanirwa-kuva nezviitiko zvekufamba kwegore rinouya. Ichi chinyorwa chinoisa simbiso pane zvakanakisa zvifambiso zvekufamba zviitiko - kuve nechokwadi chekuti vafambi vanove nemhedzisiro yakanaka kwese kwavanosarudza kuenda.
Zvitsuwa zveCook Islands zviri kure uye zvinodadisa - imwe yenyika diki pasi rose - inoti nzvimbo inoshuviwa senyika yekutanga kutsvaga muna 2022, uku Norway ichiisa yechipiri neMauritius yechitatu.
Nzvimbo yeLonely Planet nhamba-imwe muna 2022 iWestfjords, Iceland, dunhu renyika yechitsuwa isina kubatwa nekushanya kwevanhu vakawanda uko nharaunda dziri kushanda pamwechete kuchengetedza nekusimudzira nzvimbo dzadzo dzinoyevedza. West Virginia, USA inopinda yechipiri, ichiteverwa neXingshuabanna, China.
Nhamba-imwe yeguta Auckland, New Zealand yakazivikanwa nekuda kwekutumbuka kwayo kwetsika nzvimbo uko kutariswa kuri pakugadzirwa kwenzvimbo, nepo Taipei, Taiwan iri pachinhanho chechipiri, neFreiburg, Germany iri pachinhanho chechitatu.
Gore rega rega, Lonely Planet's Best in Travel lists inotanga nemazita kubva kuLonely Planet's yakakura nharaunda yevashandi, vanyori, blogger, vanotsikisa vanobatana nezvimwe. Mazita acho anobva aderedzwa neboka redu renyanzvi dzekufamba kuenda kunyika gumi chete, matunhu gumi nemaguta gumi. Imwe neimwe inosarudzwa nekuda kwemusoro wayo, zviitiko zvakasarudzika, 'wow' chinhu uye kuzvipira kwayo kunoenderera kune inoenderera mberi yekushanya maitiro.
Sekureva kwaLonely Planet's VP weExperience Tom Hall kuburitswa kwepagore kweLonely Planet "inopisa runyoro" yenzvimbo uye zviitiko zvekufamba kwaisakwanisa kuve nenguva. "Mushure mekumisikidzwa, yave nguva yekubvisa zvirongwa zvekufamba zvakamisikidzwa kubva pasherufu uye kuti zviitike," Hall akadaro pakuburitswa kwechinyorwa nhasi.
"Mazita anopemberera nyika mumhando dzayo dzese dzinokwezva," anoenderera mberi Hall. "Kubva kumadziva nemasango eCook Islands kusvika kumapopoma nemakomo eWestfjords yeIceland, kuburikidza nezvinofadza zveAuckland nemumaguta."
Senguva dzose Lonely Planet's Best in Travel inoendesa zvitsva kunzvimbo dzakakurumbira dzakadai seNorway neDublin, Ireland, uye inofukunura mamwe matombo asingazivikanwe seShikoku, Japan neAustralia inoyevedza Scenic Rim uye pasina mubvunzo iguta reGermany rakagadzikana zvikuru reFreiburg.
Iyo Lonely Planet Yakanakisa muKufamba 2022 - Nzvimbo Yepamusoro gumi
Wepamusoro 10 Nyika
Top 10 Matunhu
7. Desert reAtacama, Chile
Top 10 Maguta
6. Nicosia/Lefkosia, Kupro
Gunyana 29, 2021 pa 12: 02